Kharashaadka ISPARK Kordhiyey 2020? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKharashaadka ISPARK Kordhiyey 2020?
04 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
Immisa khidmadaha ispark
FeesSPARK ajuurada gawaarida la dhigto ee Magaaladda Istanbul ayaa la kordhiyay 40 boqolkiiba.
Muwaadiniintu waxay ka falceliyeen socod-baradka ku dhacay go’aamadii ka soo baxay shirarkii baarlamaanka ee bishii Diseembar 2019 ee IMM.
Go'aanka la qaatay ka dib shirkii baarlamaanka ee bishii hore, kordhinta mushaharka waa sidan soo socota; Degmooyinka loo cayimay inay yihiin Gobolka 1aad, khidmadaha gawaarida la xiray waa 0 lira ilaa 1 lira 11-12.5 saacadood, laga bilaabo 2 lira ilaa 8 lira aag 9, laga bilaabo 1 lira ilaa 8 lira aagaga furan, min 9 lira ilaa 2 lira aaga 11aad 13 rodol ilaa 1 rodol, 12 rodol oo gobolka ah ayaa laga saaray 14 rodol ilaa 2 rodol.
Marka laga hadlayo qiimaha gelitaanka TIR-yada 1 saac 14 rodol 16 rodol, gawaarida 8 rodol ilaa 9 rodol, gawaarida waaweyn iyo basaska ilaa 10 rodol 11,5 rodol ayaa laga saaray.
Khidmada dayactirka ugu hooseysa billaha ee Kayışdağı Darülaceze Facilities waxaa laga saaray 925 rodol ilaa 20 rodol.
Dakhliga cusub ayaa la soo saaray laga bilaabo 01 Janaayo 2020 wixii ka dambeeya.
Gawaaridaada gaariga ISPARK sii wad subway tareenka Kadikoy-Kartal
ISPARK ayaa meheradaha baarkinka gawaarida u wareejiyay
Khidmadaha ISPARK 2020
Maanta Taariikhda: Janaayo 5, 2017 Keçiören Metro